C/wali Gaas oo si caro leh uga hadlay Kufsi lagula kacay Gabadhii aad u da’yar | TOP NEWS
C/wali Gaas oo si caro leh uga hadlay Kufsi lagula kacay Gabadhii aad u da’yar
By Tifaftiraha Somalida Maanta on January 17, 2017 No Comment
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Gaas, ayaa si adag uga hadlay Gabar saacadihii lasoo dhaafay lagu kufsaday oo ka dhacay degmada Goldogob ee gobolka Mudug.
Idaacada KNN ee magaalada Muqdisho, ayaa baahisay in Madaxweynaha maamulka uu ku goodiyay in talaabo sharci ah laga qaadi doono 5-ta ruux ee loo qabtay falkaasi, isagoo ciidamada amaanka ku amray inay muujiyaan dadaal lagu badbaadinaayo dumarka.
Madaxweyne C/wali Gaas ayaa falkaasi kadib xiriir la sameeyay maamulka degmada Goldogob iyo Laamaha cadaalada Puntland isla markaana faray in dhalinyarada falkaasi loo qabtay la horkeeno Cadaalada, sida ay sheegtay KNN.
Gaas, ayaa sidoo kale Gabadha falkaasi lagula kacay iyo qoyskeeda u ballanqaaday inuu garab kasiin doono xalinta dhibkaasi, waxa uuna ugu laabqaboojiyay in dhalinyaradaasi la horgeyn doono Cadaalada.
C/wali Gaas oo si caro leh uga hadlay Kufsi lagula kacay Gabadhii aad u da’yar added by Tifaftiraha Somalida Maanta on January 17, 2017